आर्थिक समाचारNamaste Nepal
धरान / धनकुटा घर भई धरान बस्दै आएकी कविता राई भने फरक किसिमकी छिन् । जो अपाङ्ग श्रीमानको पालनपोषणका लागि ई रिक्सा अर्थात् सिटी सफारी चालक छिन् । श्रीमानको जन्मजात नै एउटा खुट्टा छैन अहिलेसम्म मैले नै उहाँलाई पाल्दै आएको छु उनले भनिन् । धनकुटा रहँदा नै विवाह भएकी उनी परिवार धान्नका लागि सहर हान्निइन् । धरान आएपछि के गर्ने कसो गर्ने ? उनमा कौतुहलता छायो । उनले आफैले...
बुसान कोरिया / ताप्लेजुङ लिङ्तेप तथा मिरिङ्देन-४ का मिथुन हाङ्गाम लिम्बु जो की हालमा “ट्रान्फर मैलाटिज” नामको रोग लागेर जीवन र मरण सँग लडीरहनु भएकोे छ। बिरामी कमरबाट मुनि शरीरको सबै भागहरु नचल्ने भएको छ। गत तिन बर्ष देखी बिरामी भएकोले उपचारको लागी आफ्नो जग्गा जमिन सबै धरौटिमा भएकोेले हालमा घर नभई झापामा आफ्नो आफन्तको घरमा बसिरहनु भएकोे छ। उपचार गर्ने क्रममा बिरामी घरबिहिन भइ अझै पनि उपचार गर्ने पैसाको...
धरान । मेहनत गर्ने हो भने एक दिन सफल हुन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहारण हुन बन्दना सावाँ लिम्बू । तेह्रथुम जिल्लाको आङ्दिममा रनबहादुर लिम्बू र आमा सुनकान्छी लिम्बूको जेठी छोरीको रुपमा जन्मिएकी बन्दना अहिले ढाका कपडा उद्योग तथा ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गरेर सफल उद्यमी बनेकी छिन् । गाउँकै सरस्वती निम्न माध्यमिक विद्यालय आङ्दिममा औपचारिक शिक्षा सुरु गरेर तेह्रथुमको फाक्चामाराबाट एसएलसी गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि उनी धनकुटा पुगिन् । धनकुटा...
ड्रागन फ्रुट खेतीबाट वार्षिक एक करोड रुपैयाँसम्मको आम्दानी
काभ्रेपलाञ्चोक – नमोबुद्ध नगरपालिका–२ पिपलचौर, जबदीबेँसीमा गरिएको ड्रागन फ्रुट खेतीबाट यहाँका एक किसानले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।बनेपा नगरपालिका–३ घर भएका भेषमान श्रेष्ठले चार वर्ष अगाडि १८ रोपनी जग्गा किनेर १७ रोपनीमा लगाएको खेतीबाट एक वर्ष अगाडिदेखि आम्दानी लिन सुरु गर्नुभएको हो ।सुरुको वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँको बिक्री गरेपछि यस वर्ष २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिक्री गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘विसं २०७२ भदौबाट खेती शुरु गरेको हुँ’...
मनकारी वडा अध्यक्ष जसले दुई वर्षदेखि आफ्नो तलब जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गलाई वितरण !
कञ्चनपुर : भीमदत्त नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष आसेफ कुवँरले दुई वर्षदेखि आफ्नो तलब भत्ताको रकम जेष्ठ नागरिक र पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई वितरण गर्दै आएका छन् । वडाअध्यक्ष कुवँरले घरमै पुगेर आफ्नो तलब भत्ताको रकम वितरण गर्दै आएका हुन् । नगरपालिका बाट प्राप्तहुने तलव भत्ताको रकम नलिने घोषणा गरेका कुवँरले जेष्ठ नागरिक र पूर्ण अपांगता भएकालाई वितरण गर्न थालेका हुन्। ‘पाँच वर्षे कार्यकालको तलब भत्ताको सबै रकम जेष्ठ नागरिक र...